Hodan - Gpedia, Your Encyclopedia
E-mail dc.yaaqshiid@mogadishucity.net Facebook/degmadayaqshiidh.com
Hodan waxaa ay ka mid tahay 18 degmo ee gobalka banaadir. Degmadan waxaa ay caan ku tahay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin isbitaallo, iskuulo hoose, dhexa, sare iyo hoteelooyin caan ka ah magaalada iyo xarumo ciidan iyo warshado iyo jaamacadaba. Waxaa ku yaalla 6 dugsi dhexe iyo sadax dugsiga sare ah.
Magaca degmada ayaa ku yimid qiso jaceyl oo dhab ah waxayna u dhacdey sidatan:
Sanadkii 1946-dii ayaa waxaa markey wada socdeen in muddo ah is guursadey Maxamed Saciid Ciyoow "Gentleman" iyo Hodan Xasan Haybe iyadoo Hodan ay ahayd gabar yar oo hooyadeed oo maqaayad Xamar weyne ku heysata la nooleyd, waxaana markaa Hodan da'deedu ahayd 18, halka Maxamed Saciid Ciyoow "Gentleman" uu ahaa26-sano jir, balse guurkii ka dib ayaa waxaa soo fara geliyey qoyskii Mr Gentleman oo ku andacoonayey in Hodan Xasan Haybe ay ka soo jeedo beelaha la heyb sooco sidaa daraadeedna aysan aqbaleynin in wiilasha iyo iyo gabdhaha ay u dhali doonto laga heyb sooco Somaalida inteeda kale.
Balse Gentleman oo markaa ku guda jirey halgankii SYL ayeysan u muuqan in Somaalidu kala sareyso wuuna diiday inuu furo, taasoo aaqirkii keentay in dhalinyaro reerihiisa ahi si xun u garaaceen oo weliba gacan ka jabiyeen.
Hodan Xasan Heybe iyo hooyadeed ayaa ugu dambeyn u guuray gobolada waqooyi oo ay kasoo jeedeen waxaana Maxamed Saciid Ciyoow "Gentleman" si xoog ah loogu darey Cibaado Cawaale Maalin oo ina adeertii ahayd, taasoo u dhashay ilmo fara badan oo ay ka mid yihiin Dr Cabdulaahi Gentleman oo SOS isbitaal Muqdisho ka shaqeeya iyo Yaasiin, Zaynab iyo weliba Cabbaas.
Sanadkii 1968-dii markuu dhisanayey Shineemada Hodan ayuu go'aansadey inuu ugu magac daro gabadhuu indhihiisa ka jeclaa ee Hodan Xasan Heybe waxaana degaanka uu ka dhistey shineemadu uu ahaa beer uu ka baxo suufka waxaana lahayd Faaduma Raage , waxaana halkaa ka biloowdey in si fiican loo degaameeyo agagaarkii shineema Hodan.
Hodan Xasa Heybe waa ay nooshahy waxayna degan tahay magaalada Boorame waana 87- sano jir. Su.aal
Waa meeqo waxoot dagmada hodan
1 hoteelda caanka a
4 meelaha caanka ah
5 suuqyada =
hoteelda caanka a
Maka al -Mukarama
Raasa Hotel and Restaurent
Hoteel Naasa Hablood 1&2
Hotel 26-ka Juun
Hotel and Baar Raaxo
isbitaalka ahmed fanax
Isbitalka cusmaan fiqi
kuliyada jaale siyaad
hidaha iyo tacliinta sare
'Bold text'Bold text'wasarda arimaha dibada Wasaaradda Beeraha
garoonka kubada ee horseed
taaladii axmed gureey
masaajidka shiikh Cali suufi
. masaajidka cowska
masaajidka cabdirashid cali sharmake
postada baar raaxo hotel nasiye Guryaha bangariya Guriga luqmaan c/salaam
Qeyb ka mid ah suuqa Bakaaraha
gaheyr jaamacad caafimaadka
jamacada xawo haaruun ee cilaanka
jidka maka al -mukarama
Jidka 26 June.
Lambar afar (KM 4)Kilomitir foor
Shineema Hodan oo magaca degmaduba uu ka yimid
Shineema Shiirkole Offishaale
Shaleemada c/rasaaq timo Wayne (barakooyi)
Shineemooyinkii dagaalada ka dib:
Shineema Aweys Hurdaaye
Saldhiga booliska oo kuyaalla shaneemo kaasababalaare agteeda Shaleemo qodxaaleey albaroko akteeda Shaleemo walaalaha
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hodan&oldid=205041"